Asan’ny Apostoly 21 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao (2008)
Asan’ny Apostoly 21:1-40
21 Rehefa tsy maintsy nisaraka tamin’izy ireo izahay, dia niondrana an-tsambo, ka nanitsy nankany Kosy, ary ny ampitso kosa nankany Rodo. Rehefa avy tany izahay, dia nankany Patara. 2 Nahita sambo nita ho any Fenisia izahay ka niondrana tamin’io ary lasa. 3 Rehefa tazanay teo ankavianay ny nosy Sipra,+ dia nolalovanay ka nizotra nankany Syria+ izahay, ary niakatra an-tanety tao Tyro, satria tokony hampidina entana+ tao ilay sambo. 4 Notadiavinay ireo mpianatra ka hitanay, ary nijanona tao fito andro izahay. Ary notarihin’ny fanahy+ izy ireo hiteny imbetsaka tamin’i Paoly mba tsy hankany Jerosalema. 5 Rehefa tapitra ireo andro ireo, dia nandeha nanohy ny dianay izahay. Ary nanatitra anay hatrany ivelan’ny tanàna izy rehetra, niaraka tamin’ny zaza amam-behivavy. Dia nandohalika+ teo amin’ny torapasika izahay ka nivavaka, 6 ary nifanao veloma.+ Dia niakatra an-tsambo izahay fa izy ireo kosa niverina nody. 7 Ary nandeha sambo avy tany Tyro izahay, ka tonga tany Ptolemaisy. Dia niarahaba an’ireo rahalahy izahay ary nijanona iray andro teo amin’izy ireo. 8 Niainga indray izahay ny ampitson’iny ka tonga tany Kaisaria+ ary niditra tao an-tranon’i Filipo mpitory ny vaovao tsara, anisan’ireo fito lahy.+ Dia nijanona tao aminy izahay. 9 Ary nanan-janakavavy virjiny efatra izay naminany+ izy. 10 Ary raha nijanona andro maro tao izahay, dia nisy mpaminany atao hoe Agabo+ nidina avy tany Jodia, 11 ka tonga teo aminay. Ary nalainy ny fehikibon’i Paoly ka namatorany ny tongotra aman-tanany, dia hoy izy: “Izao no lazain’ny fanahy masina: ‘Toy izao no hamatoran’ny+ Jiosy any Jerosalema ny lehilahy tompon’ity fehikibo ity, ary hatolotr’izy+ ireo eo an-tanan’ny olona hafa firenena izy.’” 12 Rehefa nandre izany izahay sy ireo tao amin’io toerana io, dia niangavy an’i Paoly mba tsy hiakatra+ ho any Jerosalema. 13 Fa namaly izy hoe: “Fa nahoana ianareo no mitomany+ sy manaketraka ny foko+ toy izao? Izaho ange vonona ny hafatotra e, ary na ny ho faty+ any Jerosalema koa aza, noho ny anaran’i Jesosy Tompo.” 14 Koa tsy nety niova hevitra mihitsy izy ary nanaiky ny teniny izahay, ka nanao hoe: “Aoka ny sitrapon’i+ Jehovah no hatao.” 15 Rehefa afaka ireo andro ireo, dia niomana ho amin’ny dia izahay, ary niakatra tany Jerosalema.+ 16 Niaraka taminay koa ny mpianatra sasany avy any Kaisaria+ mba hitondra anay ho any amin’ilay tokony hampiantrano anay, dia i Menasona avy any Sipra, izay efa mpianatra hatry ny ela. 17 Faly nandray+ anay ny rahalahy, nony tonga tany Jerosalema izahay.+ 18 Fa niditra tao amin’i Jakoba+ niaraka taminay kosa i Paoly ny ampitso, ary tao daholo ny anti-panahy rehetra. 19 Niarahaba azy ireo i Paoly ary nitantara tamin’ny an-tsipiriany+ izay nataon’Andriamanitra teo amin’ny olona hafa firenena, noho ny fanompoana nataony.+ 20 Nanome voninahitra an’Andriamanitra izy ireo nony avy nandre izany, ka nanao tamin’i Paoly hoe: “Hitanao moa, ry rahalahy, fa misy an’arivony ny Jiosy mpino, ary fatra-panaraka ny Lalàna+ izy rehetra. 21 Nisy tsaho anefa ren’izy ireo momba anao hoe ianao, hono, mampianatra ny Jiosy rehetra any amin’ny firenena hafa mba hiala amin’ny Lalàn’i Mosesy,+ ka milaza amin’izy ireo mba tsy hamora+ ny zanany na hanaraka ny fomba fanao. 22 Koa inona no tokony hatao amin’izany? Tsy maintsy ho reny mantsy izao hoe tonga ianao. 23 Koa ataovy izao lazainay aminao izao: Misy efa-dahy eto, izay efa nivoady. 24 Ento ireo,+ ka midiova miaraka aminy ianao araka ny Lalàna, ary aloavy izay ho lany+ mba hanaratana ny lohany.+ Amin’izay dia ho fantatry ny rehetra fa tsy misy mitombina ny tsaho naely momba anao, fa mitondra tena tsara ianao sady mitandrina ny Lalàna koa.+ 25 Ny amin’ireo hafa firenena efa mpino kosa, dia efa nalefanay ny fanapahan-kevitray ny amin’ny tokony hifadian’izy ireo ny zavatra natao sorona ho an’ny sampy,+ mbamin’ny ra+ sy ny biby nokendaina+ ary ny fijangajangana.”+ 26 Koa nentin’i Paoly ireo lehilahy ireo ny ampitso. Ary nanadio ny tenany niaraka tamin’izy ireo izy, araka ny Lalàna,+ ary niditra tao amin’ny tempoly mba hampahafantarana fa ho tapitra+ ny andro fidiovany araka ny Lalàna, mandra-panolotra fanatitra+ ho an’ny tsirairay amin’izy ireo.+ 27 Ary rehefa ho tapitra ny fito+ andro, dia nahita an’i Paoly tao amin’ny tempoly ny Jiosy avy any Azia, ka nampisahotaka ny vahoaka rehetra+ ary nisambotra an’i Paoly, 28 sady niantsoantso hoe: “Vonjeo, ry Israelita, fa io ilay lehilahy mampianatra ny olona rehetra hatraiza hatraiza hanohitra ny vahoaka+ sy ny Lalàna ary ity toerana ity. Ary mbola nampiditra Grika tato amin’ny tempoly koa izy ka nandoto ity toerana masina ity.”+ 29 Efa hitan’izy ireo niaraka tamin’i Paoly tao an-tanàna mantsy i Trofimo+ Efesianina, ka noheveriny fa nampidirin’i Paoly tao amin’ny tempoly izy. 30 Dia nisavorovoro ny iray tanàna,+ ary nihazakazaka nitangorona ny olona. Koa nosamborin’izy ireo i Paoly ka notaritaritiny tany ivelan’ny tempoly,+ ary nohidiana avy hatrany ny vavahady. 31 Rehefa nitady hamono azy izy ireo, dia tonga tany amin’ny mpitari-tafika ny teny hoe nisahotaka ny olona rehetra tao Jerosalema.+ 32 Koa naka miaramila sy manamboninahitra avy hatrany izy, ary nihazakazaka nidina ho any amin’ireo.+ Nijanona tsy nikapoka an’i Paoly intsony ireo raha vao nahita an’ilay mpitari-tafika+ sy ny miaramila. 33 Dia nanatona ilay mpitari-tafika ka nisambotra an’i Paoly ary nanome baiko mba hamatorana azy amin’ny rojo vy+ anankiroa. Ary nanontany izy hoe iza izy ary inona no nataony. 34 Fa niantsoantso ny vahoaka, ka hafa no nolazain’ny sasany, ary hafa no nolazain’ny sasany.+ Koa tsy nahafantatra izay tena marina ilay mpitari-tafika, vokatry ny tabataba. Dia nandidy ny hitondrana an’i Paoly ho any amin’ny toby miaramila izy.+ 35 Rehefa teo amin’ny tohatoha-bato anefa i Paoly, dia nihasarotra ny raharaha, hany ka nobatain’ny miaramila izy satria nahery setra ny vahoaka. 36 Mbola nisy olona maro be nanaraka ihany anefa sady niantsoantso hoe: “Vonoy any io!”+ 37 Ary nony efa hoentin’ny miaramila ho any an-toby i Paoly, dia hoy izy tamin’ilay mpitari-tafika: “Mahazo milaza zavatra aminao ve aho?” Hoy izy: “Mahay miteny grika angaha ianao? 38 Fa tsy ianao moa ilay Ejipsianina nandrisika olona hikomy tamin’ny fanjakana fahiny,+ sady nitondra an’ireo efatra arivo lahy mpitan-tsabatra ho any an-tany efitra?” 39 Hoy i Paoly: “Izaho ange Jiosy+ e, ary avy any Tarsosy+ any Kilikia, sady olom-pirenen’ny tanàna malaza. Koa miangavy anao aho, avelao aho hiteny amin’ny olona.” 40 Dia nahazo alalana i Paoly, ka nitsangana teo amin’ny tohatoha-bato ary nanao fihetsika+ tamin’ny tanany mba hampangina ny olona. Koa nangina daholo ny rehetra. Ary niteny tamin’ny teny hebreo+ izy hoe:
Asan’ny Apostoly 21